शासनको अनुभूति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असार २८, २०७५ विशाल भारद्वाज
काठमाडौँ — नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।
तर जनतालाई सरकारप्रति उत्साहप्रद विश्वास नभएको र सरकारसमेत सार्वजनिक हितमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा धेरै कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ हो । जनतामा सुशासनको अनुभूति आम अनुशासन कायम गर्न र दीर्घकालीन सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
कानुनी शासन, सार्वजनिक सरोकारमा तदारुकतायुक्त सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण तथा जनताको शान्ति तथा विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्न वातावरण तयार सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । आज तय गरिने नीति तथा कानुनले सुदूर भाविष्यसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले नीति–नियम तर्जुमा गर्दा संवेदनशीलता चाहिन्छ । कानुन अमूकको प्रभाव र लाभको लागिभन्दा पनि सबैको हितार्थ बनाउनुपर्छ ।
जसरी विगतमा कानुन निर्माताहरू नै आफ्नो स्वार्थ रहने विषयका कानुन निर्माणमा लागेको सुनियो । विरोधबीच अनुचित विषयहरू संसदीय समितिमा छलफलमा आएको सुनियो । यस्ता समाचारले कानुन निर्माणमै चलखेल हुन्छ कि भन्ने शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता विषयहरूको समग्र रूप नै सरकार र व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यताको कारण बन्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले कानुन जनताको हितार्थ बन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
शासन कानुन सम्मत चल्नुपर्छ । तर कानुन नै कार्यान्वयन नहुनुमा कित कानुन कार्यान्वयनयोग्य छैन वा कार्यान्वयन गर्नेमा कमजोरी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पुराना कानुनहरू सुधार नहुँदा जनताले समयसापेक्ष सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएको तथा नयाँ चुनौतीलाई हाम्रा संयन्त्रहरूले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो । निश्चित समय–सीमापछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले कानुनको प्रभावकारिता कायम गर्छ । कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सुधार्न सकिन्छ ।
कानुनको कार्यान्वयन विशेषगरी दुई विषयमा भर पर्छन् । पहिलो, पक्राउ पर्ने सम्भावना र अर्को, पक्राउ परे तिर्नपर्ने जरिवाना । यी कुनै पनि विषयमा एक हुने, अर्को नहुने अवस्थाले विकृति रोक्न सकिन्न । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु लागत बढाउनु हो । धेरै कानुनमा सजायको प्रकृति र दण्डको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ भने कार्यान्वयनको संरचना अत्यन्त कमजोर छ ।
एकातिर नियन्त्रण गरिने विषयहरू स्पष्ट छैनन् भने दण्ड–सजाय पनि एकमुष्ट उल्लेख गरिएका छन् । दण्डनीय कार्य स्पष्ट नगरी अधिकतम जरिवाना तोक्दा त्योभन्दा अधिक फाइदा हुने अपराध प्रोत्साहित हुन्छन् । प्रभावको स्तर र मात्राको आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए केही रकम जरिवाना भरेर करोडांैको क्षति गराउने नियत घटाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विलम्ब गर्दा ८ रुपैयाँमात्र जरिवाना लाग्ने अवस्था छ, जसले समग्र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।
अनुगमन प्रचारमुखी देखिन्छ । कहिलेकाहीं आउने पर्वजस्तो अनुगमन गर्ने गरिन्छ । कसैको इच्छाभन्दा पनि संस्थागत संरचनासहित निरन्तर र वैज्ञानिक अनुगमन नै नियम पालनाको आधार हो । निरन्तर अप्रत्यक्ष र सशक्त अनुसन्धानले अनुगमनको आतंक न्यूनीकरण र नियमनको प्रभावकारिता बढाउँछ । कानुन कार्यान्वयनको अर्थ अनुगमनमात्र नभई कानुनको उद्देश्य प्राप्ति हुनु हो ।
यातायातको सिन्डिकेट पराजित भएको महसुस भएपछि जनताले अरू क्षेत्रमा समेत यस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । यी अनुरोध जनतालाई सहजता दिने विषयमा अग्रसर हुन मार्गदर्शन त हो नै, यस्ता कार्यमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी सहयोगका लागि अग्रसर छौं भन्ने सन्देश पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि बेथितिले जरा गाड्दै आएको छ । समाज पनि जति भने पनि सुधार हुँदैन भनी चुप लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताको साथ नलिई सुधार असम्भव छ । साथसहयोग त्यतिकै प्राप्त हुन्न । यसका लागि सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम हुनुपर्छ ।
प्रभावकारी नियमन नै शासकीय अनुभूतिको औजार हो । नियमद्वारा दिइएको सेवाले नै जनताको सुख तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । नियमको थुप्रो लागे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सरकारको अभाव महसुस हुन्छ ।
प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१०
सुन र आइमाई
सुनको सन्दर्भलाई लिएर महिलाको अधोगतिको व्याख्या गर्न नथाक्ने प्रगतिवादी पुरुषचाहिँ ससुराले दिएका सुनका गहनामा झिलिक्क परेर किन हिँड्छन् ?
असार २८, २०७५ लीला लुइँटेल
काठमाडौँ — ‘आइमाईलाई सुन भए अरू केही चाहिँदैन, सुनका लागि आइमाईले प्राणै फाल्छन्, सुन भए आइमाई चिताबाट पनि उठेर आउँछन्, सुनको हो भनिदियो भने आइमाईले घाँटीमा जाँतो नै पनि झुन्ड्याएर हिँड्छन् ।’ घरपरिवारभित्र मात्र नभएर कार्यक्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत हुने यस्ता साझा टिप्पणी अधिकांश नेपाली महिलाले सुनेको हुनुपर्छ ।
अझ प्रगतिवादी कहलिएका पुरुष मित्रहरू महिलाको उन्नति हुन नसक्नुको मुख्य कारकका रूपमा शृङ्गार र सुनका गहना नै रहेको दर्शन छाँटेर कहिल्यै पनि थाक्दैनन् । यसरी सुनका सन्दर्भबाट महिलाको आलोचना गर्ने पुरुषहरूले आमा, दिदीबहिनी तथा पत्नीले सुनका गहना किन्न खोज्दा माथि उल्लिखित टिप्पणी गर्ने तर ससुराबाले विवाहमा लगाइदिएका औँठी, सिक्री, ब्रासलेटलगायतका गरगहनामा झिलिक्क परेर हिँड्न पाउँदा गौरवको अनुभव गर्ने दृश्य पनि हाम्रो समाजमा छ ।
सुन बारेका यस्ता सन्दर्भ कुनै व्यक्तिको स्वभाव एवं परिवारको आन्तरिक समस्या भनेर मात्र पन्छिन सकिने स्थिति भने पटक्कै देखिँदैन । राज्यको नेतृत्ववर्गमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणमा उल्लिखित सुन दाइजोबाट पाएको भन्ने गरिएकाले पनि सुन संस्कृतिको पालनपोषण राज्य एवं नेतृत्ववर्गबाटै भएको स्पष्ट हुन्छ । अझ रुढिवादी कुसंस्कारहरूको अन्त्य तथा शोषित, उत्पीडित पीडितका पक्षमा ‘जनयुद्ध’ लडेको हवाला दिने र आफूलाई क्रान्तिकारी भनाउन चाहनेहरूले समेत दाइजोमा प्रशस्त सुन ल्याएको/पाएको घोषणा गौरवतापूर्वक (निर्लज्जतापूर्वक ?) गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी ‘दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई बढीमा चालीस ग्राम सुन वा सो बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गहना र तोकिएको रकमसम्मको कपडा तथा अन्य जिन्सी सामान राजीखुसीले दिन सक्नेछ’ भनेर नेपालको कानुनमै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने अर्काेतिर कुनै राजनैतिक पार्टीले ‘आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा विजयी भए १२ कक्षा पढेका र विवाहको उमेर भएका महिलालाई आधा तोला सुनको मङ्गलसूत्र वा सो बराबरको रकम दिने’ भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको हास्यास्पद स्थिति पनि हामी सबैले देखेसुनेकै हो ।
हाम्रो पारम्परिक एवं अत्याधुनिक दुवै प्रचलनले महिलाका लागि धेरै गरगहनाको सिर्जना गरेको पाइन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विवाहमा दुलाहा पक्षले गहना दिनु आवश्यक भएको हुनसक्छ । त्यसैले गहना त्यसमा पनि सुन उनीहरूको प्रिय भएको हुनसक्छ । अर्काेतिर हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिलाका हातमा चलअचल सम्पत्तिको हिस्सा नहुँदा शरीरमा भएका न्यून रकमका गहनाले उनीहरूलाई सङ्कटको समयमा थोरै भए पनि राहत दिनसक्ने देखिन्छ ।
एकछिन मानौँ— यी विविध कारणले महिला त गहनाका भोका भए रे, तर त्यही सुनको सन्दर्भलाई लिएर महिलाको आलोचना गर्दै उसको अधोगतिको व्याख्या गर्न नथाक्ने दार्शनिक एवं प्रगतिवादी पुरुषचाहिँ ससुराले बाले दिएका सुनका गहनामा झिल्लिक्क परेर किन हिँड्छन् ? अझ यसमा जनवादी एवं प्रगतिवादी राजनीति गर्ने क्रान्तिकारीहरूकै लर्काे ठूलो देखिन्छ । ससुराले ज्वाइँलाई दिने सुनको सन्दर्भलाई परम्परागत प्रचलन रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको विरोध गरेर ठूलाबडाको चित्त दुखाउन नचाहेको भनाइका साथ ‘मैले मागेको होइन, दिनेले दिए के गर्नु त, चलनको विरोध गर्नुभएन’ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति पनि मैले धेरै पुरुष मित्रहरूबाट सुनेकी छु ।
शोषित, उत्पीडित तथा सामन्तवादको अन्त्यका लागि जनयुद्ध लडेर नेतृत्वमा पुगेको धाक दिने र पुग्ने सपना देख्नेहरूले एकजना ती निरीह ससुराबालाई रुढिवादी कुसंस्कारका विरुद्ध सम्झाउने सामथ्र्य नभएको त पक्कै होइन होला । यसरी सुन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले दाइजोमा सुन नल्याएको निहुँमा लोग्ने र सासूहरूबाट जिउँदै जलाइएका महिलाहरूलाई जिम्मेवार नेतृत्ववर्गको हैसियतले कसरी पो सान्त्वना देलान् अनि त्यस्ता पीडकलाई कुन नैतिकताका आधारमा कारवाहीका लागि आवाज उठाउने सामथ्र्य राख्लान् ? अर्काेतिर दाइजोमा यसरी सुन बटुलेको सार्वजनिक घोषणा गरेर जग हँसाउन समेत बाँकी नराख्ने प्रगतिवादीहरू नै महिलाको अधोगतिको कारकका रूपमा सुनका गहना रहेको कुरा गरेर थाक्दैनन् । योभन्दा बिडम्बना र हास्यास्पद कुरा यस धर्तीमा अरू के हुन सक्छ ?
यति कुरा गरिसकेपछि मनमा लागेका प्रश्न– महिलाले लगाएर हिँड्दा कमजोरी एवं अधोगतिको कारक मानिने सुन पुरुषले लगाएर हिँड्दाचाहिँ गौरवको प्रतीक कसरी हुनसक्छ ? कमजोरी एवं अधोगतिको कारक मानिने सुन नलगाउन महिलालाई अर्तीउपदेश दिन पछि नपर्ने प्रगतिवादी एवं क्रान्तिकारी मित्रहरूले पुरुष सहकर्मीलाई तिमीलाई सुनका गहना लगाएर किन हिँड्नुपर्‍यो भनेर सार्वजनिक रूपमा सोध्ने हिम्मत राख्छन् कि राख्दैनन् ?
विवाहमा ससुरासँग दाइजोका रूपमा सुन लिनु अपराध हो भनेर सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न किन नसकेको ? आफूले लगानी गरेर जोड्दा मात्र अधोगतिको कारक हुन् अनि अर्कालाई घरखेत बन्धकी राख्न बाध्य बनाई लिएको सुनचाहिँ गौरवपूर्ण के कारणले हुने ? अर्काको सम्पत्तिमा राल किन चुहाएर सित्तै पाए अलकत्रासमेत खाने प्रवृत्तिलाई हामीले कहिलेसम्म बढावा दिइरहने ?
कुनै पनि मानिस व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ नै तर एउटा बिम्बात्मक स्वरूप प्राप्त गरिसकेको अनि समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका व्यक्तिको प्रत्येक क्रियाकलाप सार्वजनिक चासोको विषय बन्नपुग्छ । त्यसैले समाजमा एउटा स्थान बनाइसकेको र बनाउन प्रयत्नरत व्यक्तिको कथनी र करणीमा विपर्यास नहुँदा मात्र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नसक्ने यथार्थतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ र यसैमा उसको सफलता निहित हुन्छ ।
प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:०९